Imfuyo yokutya kwempahla yeepellet yokutya kweenkukhu kwenziwa ngombona neenkozo
I-VTKLP uthotho lokusila imfuyo pellet lokusila ungenza pellets feed ngumbona,ingqolowa ,irayisi, ingca yombona, igobolondo, irayisi husk, ingqolowa, ikotoni yembewu, ingqolowa, Ilanga lembewu iqokobhe,isitya somqhaphu, ukhula, njl .Oku kuku ukutya kwepellet yokutya kungafakwa amandla ombane, injini yedizili, i-injini ye-petroli kunye netrektara. Luluphi uhlobo lwezilwanyana ozenzela ukutya, indleko zemveliso yeyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele, apho iinkukhu zisitya ukutya okuziinkozo kwinkukhu zithatha inxenye enkulu kwimveliso yokuphilisa kwaye imveliso yokutya yemfuyo iphaya ngemigangatho yokugqibela. Inyaniso, indleko yokufuya kwenkukhu yokupheka ipellet ichaphazeleka zizinto ezininzi, bengathethi nje ngexabiso.Bantu abaninzi bacinga ukuba indleko zokufuya kwenkukhu zilingana nexabiso labo, yiyo loo nto uhlala ukhetha eyona yexabiso eliphantsi lokunciphisa iindleko xa bethenga umatshini wokugaya iinkukhu.
Amanqaku eenkukhu ezityiwayo zityiwa
1). Ukucocwa kunokusetyenziselwa inkukhu, idada, intlanzi, iinkomo.pig, iintaka, inja, njl, kunokuba umgubo oxutywayo unokufumana izibonelelo eziphezulu zoqoqosho.
2). Ulwakhiwo olulula lokutya okuziinkozo ngepellet, ulungelelwaniso ngokubanzi, igubungela indawo encinci, ingxolo ephantsi. Ukusetyenziswa okuphezulu kunye nokusetyenziswa okuncinci kwezilwanyana ezondla i-pellet mill.
3) .Umgubo wokutya, isidlo sengca asiyidingi okanye sinolwelo oluncinci, emva koko inokwenzelwa ubumbano. Eyona nto isisiseko kumxholo wokufuma kokutya okuziinkozo kukugrumba ngaphambi kokufuma kwezixhobo, zilungele ngakumbi ukugcinwa.
4). Ukulungisa ukomisa imveliso yokutya kwemfuyo, ukuveliswa kwepellets zokutya kunobunzima obuphezulu, indawo egudileyo, Ukunyanga ngaphakathi, inokuphucula ukuntywila kwesilwanyana kunye nokufakwa kwezondlo.